सावित्री बस्नेत | GNN Nepal | Nepali Online News Portal GNN Nepal सावित्री बस्नेत | GNN Nepal | Nepali Online News Portal
सावित्री बस्नेत जीएनएन नेपालकी संवादाता हुन् ।
सावित्री बस्नेतका लेखहरु
https://www.youtube.com/watch?v=u0uwPLbgyBE काठमाडौँ । कोरोना कहरबाट गुज्रिरहेको मुलुकमा पुन: अर्को म्युकोरमाइकोसिस (कालो ढुसी) नामक संक्रमणले पनि पाइला टेकेको छ । कारोना संक्रमणबाट निको हुँदै गएका मानिसहरु अब कालो ढुसीको आक्रमणमा पर्न थालेका छन् । एउटा ट्रेन्ड नै छ, भारतमा जुन-जुन रोग देखीयो, त्यस्ता रोगहरु नेपालमा पनि स्वत देखिन थाल्छन् । पछिल्लो…
त्यस्तै गत वर्ष कुलतमा फस्ने केटीको सङ्ख्या १ थियो भने अहिले ६/७ मा पुगेको छ । कुलतमा फस्ने बढ्दो अनुपात केटाको भन्दा केटीहरूको बढी भएको बोहोरा बताउँछन् । किन भन्ने यसको ठ्याक्कै उत्तर नभए पनि अहिले महिलाहरू बढी कुलतमा फस्दै गैरहेको पाइएको छ ।
देशमा कोरोना सङ्क्रमित हुनेहरूको सरकारी ग्राफ घट्दै गएको देखिन्छ । अस्पतालहरू खाली हुन थालेका छन् । मिनी लकडाउन लगाएको पनि एक महिना टेकिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कयौँ हुँदा खाने मान्छेहरू अलपत्र परिसकेका छन् ।
मानसिक स्वास्थ्य सुधार्नुहोस् – ‘यो बेलामा चिन्ता, तनाव हुने तपाईलाई मात्रै होइन’
हाल नेपाली समुदाय प्रेममा धोका पाएको प्रेमी जस्तै बनेको छ, बाहिरबाट हेर्दा ठिकै भित्रबाट भने कतै पनि शान्ति नभएको । यस्तो अवस्थामा जोकसैलाई दुख, तनाव, समस्या, चिन्तित, भ्रमित, डराएको वा क्रोधित, अनुभव हुनु स्वाभाविक हो ।
सेता मडारिएका बादल र निलो आकाशको छाँया मुनिको राजधानी
काठमाडौं । उपत्यकामा सुनसान छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण जारी निषेधाज्ञाले गर्दा मानिसहरु घरै थुनिएका छन् । राजधानीका उद्योग कलकारखानादेखी कम्पनिहरु बन्द छन् । सडकमा गाडिको चाप र धुलो धुँवा कम छ । जसको फलस्वरुप वातावरण खुलेर आएको छ । केहि महिनाअघि विशवकै प्रदुषित सहर बनेको काठमाडौं जेठका यी…
कोरोना कालमा बढी रिस उठ्न थालेको छ ? कतै ‘पोस्ट-ट्रामाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर’ पो होकि ?
प्रत्येक सयौं मध्ये १० जनाले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै समयमा पोस्ट-ट्रम्याटिक स्ट्रेस डिसअर्डरको अनुभव गर्ने गरेको अन्तराष्ट्रिय रिपोर्टहरुमा पनि सार्वजनिक छ ।
सबै उमेर समूहका लागी घातक नेपालमा भित्रिएको कोरोनाका दुई नयाँ भेरियन्ट के हुन् ? यसो भन्छन् विज्ञ
नेपालमा दोश्रो लहरमा सुरुवाति चरणमा जति बिरामी परेका ती सबै यहि भेरियन्टका कारणले गर्दा हो ।
राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन – प्रधानमन्त्री र उम्मेदवार बादलबाटै ‘मौन अवधि’ उल्लङ्घन हुँदा निर्वाचन आयोग किन मौन ?
प्रधानमन्त्रीले मौन समयमा मत मागेर अपिल सार्वजनिक गरेको र राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार थापाले माधव नेपाल भेटेको भन्ने कुरा आयोगमा जानकारीमा नआएको प्रवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
भारतमा अब प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्न रोक ! नेपालमा के छ व्यवस्था ?
प्रवक्ता गौतम भन्छन्, 'हामिले पटक पटक भनी सकेका छौँ 'कोरोनाको औषधि बनेको छैन', रेम्डेसिभिर वा प्लाज्मा थेरापी कुनै पनि विधिबाट सङ्क्रमितको उपचार गर्न असम्भव छ।'
इजरायल र प्यालेस्टिनबिचको द्वन्द्व के हो ? जसले तेस्रो विश्वयुद्ध पुकारिरहेको छ !
हिंसाको बदलामा हिंसाको कारण हालसम्म सयौं मानिसहरू मारिएका छन् । जहाँ बालबालिका पनि सामेल छन् जो निर्दोष छन् ।
‘सरकार कि खोप ल्याऊ, कि व्यवस्था परिवर्तन गर’
काठमाडौँ । विश्वका केही सहरहरूमा अधिक खोपले गर्दा कोरोना सङ्क्रमितको आँकडा घट्ने क्रम बढेको छ। अर्कोतर्फ, भ्याक्सिनमा पछाडि परेका भारत, नेपाल र दक्षिण अमेरिकाका देशहरूमा भाइरसको प्रकोप भयानक तवरमा बढेको छ। उदाहरणको लागि भारतको दिल्ली, नेपालको बाँके, उपत्यका जस्ता स्थानमा कोरोना खोपको कमीले सङ्क्रमण दरमा प्रभाव पारेको छ । भने…
‘हामीसँग अस्पतालहरुमा बेडहरुको खासै कमी छैन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको मजाकको सचित्र बयान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार तेश्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री भएको पदबहाली गर्दै भने ‘यतिबेला हामीसँग अस्पतालहरुमा बेडहरुको खासै कमी छैन। र, अस्पतालका बेड एकातिर बिरामी अर्कोतिर पर्ने अवस्था छ। बेडमा भन्दा सुविधासम्पन्न अस्पतालमा जाने सबैको इच्छा हुन्छ ताकि बाँच्न सकियोस्। खास–खास अस्पतालमा मानिस केन्द्रित हुने अरु ठाउँहरुमा बेड…
मिनि लकडाउनमा राजधानीको सुनसान सडक नियाल्दा (फोटो फिचर)
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस नियनत्रण गर्नका लागी उपत्यकामा (मिनि लकडाउन) निषेधाज्ञा जारी गरेसंगै राजधानीवासीहरु घरै बस्न बाध्य छन् । सँधैजसो जाम हुने सडकहरु सुनसान बनेको छन् । सामान्य अवस्थामा यतिबेला राजधानीमा गाडिको चापसंग मानिसको भिड हुने गर्दथ्यो । तर कोरोनाका कारण अहिले सडक वातावरण शुन्य र शान्त बनेको छ…
मुस्लिम धर्मको मुख्य अभिप्राय भनेको एक इश्वरवाद् हो । मुस्लिमहरू एक ईश्वर बाहेक कसैको भक्ति गर्दैनन् ।
काठमाडौं । एक महिनाको रमजान सकिएपछि आजको दिनको सुरुवात हुन्छ । जहाँ उनिहरुले एक महिने व्रतकाललाई बिदाई गर्दै एकअर्कोसंग खुसी साट्छन् । मिठामिठा परिकार खान्छन् र अंकमाल गरेर भाइचारा देखाउँछन् । उनिहरु अर्थात् मुस्लिम समुदाय । आज उनिहरुको महान् चाड ईदुल फित्र हो । अरबी पात्रोको नवौँ महिना रमजानका २९…